Astrology Archives - Real Gaming
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်း ( 17-8-2020 to 23-8-2020 )
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်း ( 17-8-2020 to 23-8-2020 ) တနင်္ဂနွေ သားသမီး ထူးခြားသော အိပ်မက် ကောင်းများ မြင်မက် ပါလိမ့်မည် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများနှင့် လည်း အပြင်တွင်ကြုံတွေ့ ရပါလိမ့်မည် တန်ဖိုး ရှိသောပစ္စည်းများတန်ဖိုး မဖြတ်နိူင်သော လမ်းညွှန် စကားများလည်း ကြားရ ပါလိမ့်မည် မိမိရဲ့အနစ်နာခံ ကြိုးစားမူများ အတွက် ကံကောင်းမူ ရလာဒ်ကောင်းများ ရရှိ ပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင် ခါးနာခြင်း ခါးအောင့်ခြင်း ခံစား ရပါမည် ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် မပွင့်မလင်း အုံပုန်း အချစ်ဖြင့်သာ ကျေနပ် နေသေးသည့် ကာလပါ ထီ ၃၉ ပါသော …
တစ်ပါတ်စာ ၇ ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း ( 30.7.2020 မှ5.8.2020 အထိ )
တစ်ပါတ်စာ ၇ ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း ( 30.7.2020 မှ5.8.2020 အထိ ) တနင်္ဂနွေ ဒီကာလ အတွင်း မှာတော့ အလုပ်အကိုင် အကြံအစည် သစ် များကိုလည်း စတင် လုပ်ကိုင်ရန် အချိန်ကောင်း ဖြစ်ပါသည် ။ အသိဉာဏ်ကို ဦးစားပေး၍ ဖြေရှင်းပေး ပါက သင့် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံလာ ပါလိမ့် မည် သင့်အား အထူးမှာကြား လိုသည်မှာ မည်သည့် လုပ်ငန်း ပြဿနာတွေ ကိုပဲ လုပ်လုပ် အချိန်ယူစဉ်းစားပြီးမှသာ လုပ်ကိုင် သင့်ပါ သည် ။ ကံဇာတာ မညံ့ပါ ။ ငွေဝင်မည် ။ …
လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးက သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာ
လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးက သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာ သင့်ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ် ပေါ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းရှိလဲ ဘာဖြစ်မလဲ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေ လိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေ ကနေ လည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို သိနိုင်ပါတယ် ။ လက္ခဏာပညာ တတ်စရာ မလိုဘဲ အလွယ်တ ကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ပြီး နားလည် နိုင်တဲ့ နည်းလေးကို သုံးပြီး ကံကြမ္မာ တစိတ်တပိုင်းကို ကြည့်လိုက် ရအောင်နော် ။ ပုံမှန်ဆိုရင် သာမန်လူ တယောက်မှာ လက်ကောက် ဝတ်မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် ၃ ကြောင်းရှိတတ် ပါတယ် ။ လမ်းကြောင်း ၁ …
2.7.2020 မှ 8.7.2020 အထိ ၇ရက် သားသမီးအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
2.7.2020 မှ 8.7.2020 အထိ ၇ရက် သားသမီးအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခု ကာလအတွင်း ဆုံးရှုံးမည်ဟု ထင်ထားသော ငွေကြေးကိစ္စ ၊ လုပ်ငန်းကိစ္စများ အတွက် ပြန်လည်၍ အခွင့် အရေး ပေါ်ပေါက်မည့် ကာလဖြစ်သည် ။ သင်သည် ငွေကြေးကံ ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန် နေတတ်ပြီး ကြံစည်ကြိုး ပမ်းမှုတွေမှာ အလွယ်တကူ ပြည့်ဝ အောင်မြင် လာပါလိမ့်မည် ။ ကံကောင်း တိုးတတ်မှုများ ပြန်လည် ဖေါ်ဆောင် နိုင် ပြီး အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးများ မိမိနှင့် မိသားစုလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာပါလိမ့်မည် ။ လုပ်ငန်းတွင် …
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (22-6-2020 to 28-6-2020)
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (22-6-2020 to 28-6-2020) တနင်္ဂနွေသားသမီး အကြီးအကဲ ဆရာသမားတို့၏ ကူညီမစတာ ခံရပါ လိမ့်မည် အလုပ်သစ် အကိုင်သစ်များ လုပ်ကိုင်ရပါမည် ရပ်ဝေးခရီးနိူင်ငံရပ်ခြား ကိစ္စ စီစဉ်ထားသူများ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါ လိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင်ဆေးကောင်းဝါးကောင်းတွေ့မည် ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်သစ်တွေ့ပါ လိမ့်မည် ထီ၅၆ပါသော ထီထိုးပါ ယတြာ လိပ်စာ မကြာခဏကျွေးပါ တနင်္လာသားသမီး ရပ်ဝေးမှဆွေမျိူး များရောက်ရှိလာ တတ်ပါသည် ရစရာရှိသော အမွေအနှစ်များ ရရှိမည့် ကာလပါ အလုပ်တွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနှင့် အဆင်မပြေဖြစ်နေ တတ်ပါသည် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ထိန်းပါ သည်းခံခြင်းဖြင့် အရာရာအောင်မြင် ပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင် ဆီးကျင်ဆီးအောင့်ဝေဒနာခံစားရ ပါမည် ငယ်ရွယ်သူများ …
၇ ရက်သားသမီး တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း (28.5.2020 မှ 3.6.2020 အထိ)
၇ ရက်သားသမီး တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း (28.5.2020 မှ 3.6.2020 အထိ) တနင်္ဂနွေ ယခုကာလ အတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်ရန် အထူး သတိထားပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားတတ်သည်။ ငွေနှင့် လိုက်လျှင်လည်း ရှုံးသွား တတ်သည်။ ပစ္စည်းများ မငှား ပါနှင့်။ မည်သို့သော အကြောင်းအရာများရှိရှိ အားကိုးမည့်သူ မရှာပါနှင့်။ ဒုက္ခပေးတတ် ပါတယ်။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက်၊ ခါး၊ သွား ဒုက္ခပေး တတ်သည်။ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရတတ် ပါတယ်။ ထီကံကောင်းသော ကာလဖြစ်၍ တနင်္လာ သားသမီးနှင့် စပ်တူ ထိုးပါ။ ယခုကာလအတွင်း အလုပ်တွင် ဆုံးရှုံးမှုတွေ များပြားနေ ရတတ်သည်။ …
အကြပ်အတည်း အမျိုးမျိုးကို ( ၇ ) ရက် အတွင်း လွတ်မြောက်စေ နိုင်တဲ့ အဓိဌာန် တနင်္ဂနွေနေ့ ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဝင်ပါ ။ တနင်္ဂနွေနေ့.. တနင်္ဂနွေ ထောင့်.. မေတ္တာသုတ်တော် ၆ ခေါက်…. ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလ် အလုပ်အားလုံး ပြီးစီးသည့် အခါတနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျ တို့ကိုမေတ္တာပို့ အမျှေဝေပါ ။ တနင်္လာနေ့ သောကြာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော်၂၁ ခေါက် ၊ သောကြာနေ့ ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး …
အချစ်ကံခေလွန်းသူ ကြာသပတေး အချစ်ကို သိပ်မခံစားတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခံစားမိပြီဆိုရင်လည်း သူများတွေနဲ့ မတူပဲ အရမ်း ခံစားတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကြာသပတေးသားသမီး အများစုဟာ ကိုကိုတွေ/ မမတွေရဲ့ ပုံပြင်တွေမှာ နစ်မြောခဲ့ ကြဘူးတယ်။ ဘာပဲ လုပ်လုပ် သူတစ်ပါး လက်အောက်ခံ ဘဝမျိုး သဘောမကျဘူး။ ကိုယ်တိုင်သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်ကြတယ်။ စိတ်မပါပဲ အသေးအဖွဲ အလုပ်လေးက အစ အပျင်းကြီးတယ်၊ တခါတရံကျ အလုပ်အများကြီးကို တစ်ယောက်တည်း မရပ်မနား လုပ်နေတတ်ပြန်ရော။ တစ်ခါတစ်ရံ ဟန်မဆောင်ပဲ ပေါ်တင်ပြောတက်သလို ၊ ဟန်ဆောင်နေရင်လဲ အကယ်ဒမီ ရနိုင်တဲ့အထိ တော်တတ်ကြပါတယ်။ ကြာသပတေး သားသမီးတိုင်းမှာ မာနတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုစီ …
သင့်ရာသီခွင်အရ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် သင်အသည်းကွဲရလိမ့်မလဲ?
သင့်ရာသီခွင်အရ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် သင်အသည်းကွဲရလိမ့်မလဲ? ရာသီခွင်တွေတိုင်းမှာ သူ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အပြစ်အနာဆာတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာ အဲ့ဒီလို အားနည်းချက်တွေကြောင့် ကိုယ့်ဘေးနားက ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကို စွန့်ပစ်သွားစေတတ်ပါတယ်။ ပြောရရင် အသဲကွဲရတတ်ပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာ သင့်ရာသီခွင်အရ ဘယ်လိုအရာတွေက သင့်အသည်းကို ခွဲသွားနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြချင်တာပါ။ကဲ..ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်,, Aries (March 21 – April 19) သူတို့လေးတွေက ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကြင်နာတာ ချစ်တာကို ထုတ်မပြတတ်ပါဘူး။ Aries လေးတွေက သူတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားကြတယ် မှားမှန်းသိရက် လုပ်ချင်တာကိုဆက်လုပ်တတ်ကြတယ် ရေရှည်ကတိကဝတ်ပြုမှုကို စိတ်မဝင်စားကြဘူး အရာအားလုံးကိုမျှဝေခံစားနိုင်ကြတယ်။ ဒီအရာတွေက သူတို့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေဘက်က အလေးအနက်လိုက်ခံစားတတ်ခဲ့ရင် သူတို့အသဲကို ခွဲမယ့်အား နည်းချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Taurus …